हिमाल खबरपत्रिका | विश्वकपको नेपाली सपना
विश्वकपको नेपाली सपना
नेपाली फूटबलको अहिलेको प्रदर्शन बिर्सनलायक छ। तर, यसकै आधारमा मुलुकले कहिल्यै विश्वकप खेल्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्नु चाहिं ‘अतिवादी सोच’ को निरन्तरता मात्र हुनेछ।
नेपाली राष्ट्रिय फूटबल टोली ।
तालिमताका उनले देखे– सधैंजसो एउटी अधबैंसे महिला आफ्नो सानो छोरो च्यापेर आउँथिन् र तालिम सकिएपछि सँगै लिएर जान्थिन् । स्कूल पढाउने समयमा छोरालाई फूटबल सिकाउन ल्याउने ती आमाको व्यवहारले थापालाई अचम्मित तुल्यायो । एकदिन त हिम्मत गरेरै सोधे, “छोरालाई पढाउन छाडेर किन फूटबल सिकाउन ल्याउनुहुन्छ ?”
ती महिलाले दोभाषे मार्फत थापालाई जे उत्तर दिइन्, त्यो सुनेर उनी चकित भए । “यसलाई हुर्काएर एमबीबीएस गराउँदा लाखौं खर्च मात्र हुँदैन, ६ वर्षको समय पनि बर्बाद हुन्छ । तर, यदि यसले एक वर्ष मात्र व्यावसायिक फूटबल खेल्यो भने मलाई पुग्छ”, महिलाको जवाफ थियो । फूटबलप्रति ब्राजिलियन जनताको ‘क्रेज’ जान्न यो पर्याप्त थियो ।
त्यतिबेला ब्राजिलको युवा टोली अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दै थियो । तालिममै एक दिन थापालाई प्राध्यापक टिटोले प्रश्न गरे, “तिमीले कुनै दिन ब्राजिलसँग फूटबल खेल्ने सम्भावनाको कल्पना गरेका छौ ?” एकाएक आएको यस्तो कठिन प्रश्नको तयारी जवाफ थापासँग हुने कुरै भएन । “सपना भने देखेको छु”, उनले भनिदिए ।
जस्तो कि, सन् १९८५ मा भएको एशियन क्वालिफाइङ राउन्डमा नेपाल तयारीका साथ मैदानमा उत्रिएको पनि थियो । तर, सबै खेलमा हारसँगै समग्रमा ३० गोल खायो । लज्जास्पद पराजयले रन्थनिएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्य–सचिव शरदचन्द्र शाहले कप्तान रूपकराज शर्मासँग कड्किएर सोधे, “हामीले यति राम्रो तयारी गरेका थियौं । खेलाडीलाई उच्चस्तरको किट्स, डाइट पनि दिएका थियौं । यति गर्दा पनि नेपालले ३० गोल कसरी खायो ?”
त्यसबेलाका रूपकसँगै रहेका राष्ट्रिय टोलीका पूर्व मिडफिल्डर कृष्ण थापा अहिले पनि त्यो प्रसंग सम्झ्रिहन्छन् । “नेपाली दिदीबहिनीलाई रसियनसँग विवाह गराएर जन्मिएका सन्तानलाई फूटबल सिकायो भने चाहिं केही होला कि ! रूपकले ठट्यौलो शैलीमा जवाफ दिएको थियो”, थापा सुनाउँछन् । धेरैलाई अन्यथा लागेको हुनुपर्छ । तर, रूपकको आशय ‘अन्तर्राष्ट्रिय फूटबलमा नेपाली खेलाडीको सबैभन्दा कमजोर कडी नै हाम्रो शारीरिक बनोट हो’ भन्ने थियो । “प्रतियोगिताको दुई महीना अघि मात्र खेलाडीलाई दिइने सुविधाका बलमा नेपाली फूटबल कहीं नपुग्ने उसको भनाइ थियो”, थापा भन्छन् ।
नेपालले सन् १९८५ देखि नै विश्वकप छनोट प्रतियोगिता खेल्न शुरू गरेको हो । सन् १९८६ मा मेक्सिकोमा आयोजित विश्वकपका लागि भएको छनोट चरणको पहिलो खेल नेपालले दक्षिणकोरिया विरुद्ध दशरथ रंगशालामा खेलेको थियो । त्यतिबेला रंगशालामा करीब ४० हजार दर्शक उपस्थित थिए । २–० ले पराजित नेपालले सुरेश पन्थीको आत्मघाती प्रहार मार्फत पहिलो गोल खाएको थियो । श्रीराम रञ्जितकारले डिबक्स भित्र फाउल खेलेपछि पेनाल्टीबाट कोरियाको दोस्रो गोल सम्भव भयो । नेपालको भिडन्त दक्षिणकोरिया र मलेशियासँग भएको थियो । ‘होम’ र ‘अवे’ दुवै गरेर चार वटै खेल नेपालले गुमायो । प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट एउटै पनि गोल भएन । नेपाल कोरियासँग समग्रमा ६–० र मलेशियासँग ५–० ले पराजित भयो ।
सन् १९९४ मा अमेरिकामा आयोजित १५औं विश्वकपका लागि नेपालले छनोट खेल नै खेलेन । कारण भने अनौठो थियो, भिसाको समस्या र खेलाडी पलायन हुने डरले एन्फाले खेलको पहल नै गरेन । सन् १९९८ मा फ्रान्समा आयोजित विश्वकपका लागि नेपालले जापान, मकाउ र ओमनसँग प्रतिस्पर्धा गर्‍यो । जापान र ओमनमा भएका खेलमा नेपालले फेरि पनि जित आत्मसात् गर्न सकेन । तर, २३ मार्च १९९७ मा मकाउ विरुद्धको खेल १–१ गोलको बराबरीमा राख्न सफल भयो । नेपालले पहिलो पल्ट छनोट खेलमा गोलको खाता खोल्यो । नेपालले ६ खेलमा १९ गोल खाँदै, दुई गोल गर्‍यो ।
सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकपका लागि नेपाल छनोटको पहिलो चरणमा जोर्डनसँग समग्रमा १०–१ गोलले पराजित भयो भने सन् २०१८ मा रूसमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताको पहिलो चरणको छनोटमा भारतबाट समग्रमा २–० गोलले पछाडि परेपछि नेपाल बाहिरियो । पहिलो लेगमा २–० ले पराजित नेपालले दोस्रो लेग भने गोलरहित बराबरी राख्न सफल भएको थियो ।
३३ वर्षको विश्वकप संघर्षमा नेपालले छनोटका ३० खेलमध्ये २४ मा पराजय, २ मा जीत र ४ खेल बराबरी गरेको छ । यसमा नेपालको प्रदर्शन निखारिंदो होइन झ्न् झ्न् निरास पार्ने खालको छ । तर, यसैको आधारमा नेपालले कहिल्यै विश्वकप खेल्न सक्तैन भन्ने निष्कर्ष निकालिहाल्नु चाहिं चरम निराशावादी सोच मात्र हुनेछ । सपना देख्न र सकारात्मक सोच राख्न आइसल्यान्ड र नाइजर ताजा र गतिला उदाहरण बनेका छन् ।
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व डिफेन्डर श्रीराम रञ्जितकार पनि ठूलो स्तरको प्रतियोगिता खेल्न देशको आर्थिक अवस्था र भूगोलले खासै अर्थ नराख्ने बताउँछन् । “धनी देशले मात्रै फूटबल खेल्ने भए खाडीका सबै राष्ट्रले विश्वकप खेल्नुपर्ने हो । विश्वकै सुपर पावर अमेरिका यसपालि छनोट नै हुन सकेन । दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको भारत अझ्ै विश्वकप पुग्नै सकेको छैन”, उनी भन्छन् ।
उसो भए के हो त विश्वकप खेल्ने सूत्र ? आइसल्यान्ड फूटबलका प्राविधिक निर्देशक आर्नर बिल गुनार्सनले हालै दिएको अन्तर्वार्तामा फूटबल विकासमा तीन चीज महŒवपूर्ण हुने बताएका छन् । ती हुन्, प्राविधिक रूपमा दक्ष प्रशिक्षक, जरैदेखि फूटबलको विकास र पूर्वाधार निर्माण ।
फिफाले ८ वर्षपछि सन् २०२६ मा विश्वकप खेल्ने देशको संख्या ३२ बाट ४८ बनाउँदैछ । जसमा एशियाबाट मात्रै ८ राष्ट्रले विश्वकप खेल्ने अवसर पाउने छन् । “यो हाम्रो लागि मौका पनि हो । अब हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ र त्यसै अनुसार दौडनुपर्छ” थापा भन्छन्, “किनभने, विश्वकपको सपना देखेर मात्र हुँदैन, सिंढी पनि बनाउनुपर्छ ।” त्यसका लागि घरेलु फूटबलको मेरुदण्ड मानिने लिगको संरचना मजबूत बनाउने र लिगमा अनुबन्धित विदेशी खेलाडीको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन पनि थापासँग सहमत छन् । उनी एन्फा ‘ग्रासरुट लेभल’ मै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । “कुनै बेला हामीसँग खेल्न डराउने भूटानले १२ वटा ‘मिनी पिचेज’ तयार पारिसक्यो । अहिले एशिया कपको दोस्रो चरणको छनोट खेल्ने भइसक्यो”, उनी भन्छन् । जुनियर लेभलमा नेपाली टीमले राम्रो प्रदर्शन गरे पनि सिनियर टोलीले त्यसलाई दोहोर्‍याउन नसकेको महर्जनको स्वीकारोक्ति छ । “साँच्चै विश्वकप खेल्ने हो भने २० वर्ष लामो भिजन लिएर एन्फा अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।